Kedu ụzọ iji ghọọ Amazon TOP ọchụchọ?
Iji nweta ezigbo echiche nke esi ghọọ ndị ọkachamara Amazon TOP, ịkwesịrị ịchọta ihe doro anya banyere ihe ere na Amazon gụnyere. Iji jide n'aka na ị na-ewu mgbasa ahịa gị n'ụzọ ziri ezi, lelee post a iji hụ akụkụ kachasị mma ị kwesịrị ịma. Nke a ga-emeghe anya gị n'ụlọ akụ Amazon ma nyere gị aka ịzụlite ego n'ebe ahụ n'enweghị mgbalị ọbụla.
Amazon ere basics
Nyocha ndị na-agagharị na Amazon kpogharịa gaa na peeji nke ngwaahịa ma pịazie onyinye ndị dị n'okpuru nkọwa ngwaahịa ahụ iji chọpụta ihe ndị ọzọ dịnụ. Otú ọ dị, ihe mbụ ndị ahịa Amazon na-emekarị ịlele bụ ịzụta igbe - agri technology. Nkebi nke a na-egosiputa ụdị kachasị dị iche iche n'ahịa ahịa. Dị ka data ndekọ, ọnụego $ 56 nke Amazon $ 62 ijeri na-eme ebe a. Shoppers maara na ha nwere ike ịdabere na nhọrọ Amazon n'ihi na ọ na-echebara akụkụ dị iche iche dị ka price, àgwà, mkpa, na na. Iji igbe ịzụta, ndị ahịa nwere ike ịmalite usoro ịzụta ha site n'ịgbakwunye ngwaahịa dị mma maka ụlọ ahịa ha.
N'ihi asọmpi dị elu na Amazon, ọ bụghị ọrụ dị mfe ịghọ onye na-ere ahịa nke na-enweta igbe ịzụta. Ọ pụtaghị na ọ bụrụ na ị kwado elu na Amazon SERP, ị ga-aghọ onye na-ere ahịa. Iji nweta igbe ịzụta, ọ dị gị mkpa ịgbaso nduzi Amazon ma bụrụ ndị bara uru nye ndị ahịa gị.
Ihe ndị na-emetụta ebe onye ahịa na-apụta na listi ndepụta:
Ịkwesịrị inye ndị ọrụ ọnụahịa ịsọ mpi iji merie igbe ịzụta ihe. Ọ na-agụnye ọ bụghị naanị ngwaahịa efu ma ọnụahịa na-eri kwa. Shoppers ndị na-achọ ihe ndị achọrọ na Amazon nwere ike iji ọnụahịa niile tụnyere ọnụ ahịa kachasị ọnụahịa ahịa. Iji mee ka ọnụahịa gị na-asọmpi, ọ dị mkpa ka ị na-eduzi nyocha ịsọ asọ na mgbe niile. Ọzọkwa, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji ọrụ ịmepụta ihe.
Ngwá ahịa onyinye
Ngwá ahịa gị kwesịrị ịsọ asọ dị ka ndị na-ere ahịa ọzọ dị, ọ na-arịgo n'elu.
Ịkọ akụkọ ihe mere eme
Iji nweta igbe ịzụta na Amazon, ị ga-enwe ezigbo akụkọ ihe mere eme. Amazon na-echebara ihe ndị ahịa gị na-atụle na nkezi ọnụahịa nke ịzụrụ kwa ọnwa. Dị ka a na-achị, ngwaahịa ndị na-adịbeghị anya n'ahịa Amazon nwere ike ghara ịghọ ndị na-ere ere.
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emetụta nhọrọ Amazon nke onye na-ere ere. Otú ọ dị, ihe a kpọtụrụ aha n'elu bụ ihe kachasị ike. Ihe ngwọta kachasị mma bụ iji hụ na azụmahịa ọ bụla i nwetara site na Amazon na-agba ọsọ nke ọma. Ịkwesiri ịnye ndị ahịa nkwado kachasị mma na ndị ahịa na-enyere gị aka..
Mmezu Amazon bụ usoro Amazon mere iji nyere ndị ahịa aka n'ịzụ ahịa ha. N'iji usoro a, ị nwere ike izipu ngwá ahịa gị gaa n'otu n'ime ọtụtụ ebe mmemme Amazon ga-echekwa. Ọ pụtara na oge ọ bụla onye ahịa zụrụ ngwaahịa si n'aka gị, Amazon na-ebu ha. Usoro ihe a na-enyere gị aka ịchekwa oge gị ma lekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ nke ịzụ ahịa gị. Amazon na-ewepu ọtụtụ akụkụ nke mbupu na ndị ọrụ ahịa yana ịgbatị ngwaahịa gị na Amazon Prime ndị òtù, ma nyere aka iji nweta igbe ịzụta.
Atụmatụ ịmepụta ngwaahịa gị TOP chọrọ na Amazon
Ngwaahịa dị mma nke ngwaahịa a dị oké mkpa maka ọkwa elu gị na Amazon. A ga-ahụrịrị na anyị na-ekwu okwu banyere nyocha na ndepụta nke ngwaahịa gị, mana ọ bụghị banyere feedbacks na profaịlụ gị. Kemgbe ikpeazụ Amazon algorithm melite, a machibidoro ya ịmalite ọrụ ịhapụ nyocha maka nkwụnye onyinye, ego, wdg. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta nlezianya anya. Otu n'ime ụzọ kachasị mma isi mee ya bụ ịnye ndị ahịa gị ahụmahụ kachasị mma n'ịzụ ahịa. Gbalịa mee ihe kachasị mma ịmepụta nlezianya ngwaahịa dịka ha na-eduga na ọkwa dị elu na ọnụọgụ ọchụchọ ọzọ, ma mezie iwu na ahịa.
Ọ dị ịrịba ama ịtinye ọchụchọ ọchụchọ gị na aha aha, nkọwa, na okwu nkwụ. Mbụ, ị ga-achọ ịmepụta nyocha ọchụchọ ma chọpụta ihe kachasị mkpa maka ọchụchọ ọchụchọ azụmahịa gị nke a pụrụ iji maka nkwalite ndepụta gị. Na nke abụọ, ịkwesịrị iji mkpụrụokwu ndị a na-atụgharị uche na isiokwu gị na nkọwa gị iji mee ka ndepụta gị nke ọma na nke a na-ahụ anya na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ Amazon. Otú ọ dị, i kwesịghị imebi nchịkọta gị na mkpụrụokwu dịka oge Amazon Amazon na-aghọ nkọ na ị ga-ata ahụhụ maka ya. Ọ bụ ya mere ị ga-eji dee aha gị eke, kpọmkwem ma na-eme ka ndị na-azụ ahịa pịa ya site na nsonaazụ ọchụchọ. Iji mee ka nyochaa mkpokọta nke nyocha gị, ịnwere ike iji otu ngwaọrụ ndị na-enye ndụmọdụ dịka Google Keyword Planner ma ọ bụ Amazon Tool Tool.
ndepụta ngwaahịa kachasị mma
Nchịkọta ngwaahịa kachasị mma nwere ike inyere gị aka merie ahịa azụ oge. N'okwu ndị bu ụzọ, anyị nyere ntụziaka zuru ezu iji mee ka nhazi gị rụọ ọrụ nke oma. Nke a bụ ihe mere m ga-eji dee ihe nchịkọta nhọrọ kachasị mma nke ngwaahịa na-emetụta mmetụta gị na ọnụọgụ gị:
aha njirimara aha;
Nkọwapụta ngwaahịa zuru oke na atụmatụ niile achọrọ na atụmatụ bara uru;
Ihe ngbasa okwu ezi uche;
Foto ntaneti dị mma nwere ike ịbịgharịa;
Na-ekwu banyere nchegbu.
Ndị ahịa Amazon ji aka ha kpebie ihe ha chere na ọ bụ uru na ihe ha dị njikere emefu ya. Ọnụahịa gị kwesịrị ịbụ ihe ezi uche dị na ya ma dabere n'ụdị ahịa ahịa dị ala. O nwere ike ibuli ma ọ bụ daa n'oge ma ọ bụ na ọdịdị ọhụrụ nke ngwaahịa gị. Ọnụahịa gị ekwesịghị ịdị oke ala n'ihi na ọ nwere ike ịpụta nsogbu dị mma maka ndị ahịa gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji gbasaa na ngwaahịa kachasị na niche gị.